Daawo: Qoyska ugu balaaran UK oo sugaya dhalashada Ilmihii 18 - iftineducation.com
Daawo: Qoyska ugu balaaran UK oo sugaya dhalashada Ilmihii 18
iftineducation.com – Qoyska dalka Britain loo gartay inuu yahay kan ugu ballaaran ayaaa markan sugaya soo dhoweynta ilmihii 18-aad ee kusoo biira qoyska oo hadda uur ku jir ah.
Daily Mail ayaa soo daabacay farxada Hooyo Sue Radford oo39 jir ah iyo Ninkeeda Noel oo 43 jir ah, waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin Lambarka 18-aad ee dhalashada gabadhooda cusub. “Dad badan ayaa aaminsan in qoyskeena taageero ka helo dawladda, laakiin nolol maalmeedkeena waxaan kala soo baxno, foorno roodhida iyo keega aanu ku samayno oo aanu wada jir uga shaqayno aniga iyo odaygaygu.’’ ayey tiri Sue Radford.
Qoyskaani ayaa Todobaadkiiba nolol maalmeedkoodu uu ku baxaa qarash dhan 300 Gini todobaad walba oo ay raashin ku iibsadaan, halka 18-liter oo caano ah iyo kumayaal xabadood oo rooti ahna ay todobaad walba quutaan.
Inka badan 20 qof oo ku geeriyooday musiibo ka dhacday Dalka Indonesia.